China M-1 okuzenzakalelayo Cat Litter Box Ukwakha futhi Factory | Amahlaya
Umkhiqizo Wokuzilungisa kagesi
Okuzenzakalelayo Cat Litter Box
Intelligent Electric Toy
I-Smart Element & Umthombo Wamanzi
Kungani Khetha Us
I-E-3 Shell Electric Water Fountain
Ukondliwa Kwamanzi Okukhaliphile
Ibhokisi le-M-1 Automatic Cat Litter
Okuphakelayo okuzenzakalelayo kwe-E Okuzenzakalelayo Kwekati Nenja
Icala leTroli Esobala Lesilwane Esincane
I-Little Bear ejikelezayo ye-Laser Toy
E-1 Okuzenzakalelayo Cat Litter Box
Noma ngubani ogcina amakati, indle yokufosholoza yinto enesineke kakhulu, idinga ukubhekana "nodoti" odalwa ikati nsuku zonke, ngaphandle kwalokho indlu izogcwala "iphunga" lendle yekati. Futhi lokhu kuyinto ehlupha abanikazi bamakati abaningi.
I-M-1 Yokuzihlanza Ikati Litter Box kuyisinqumo esihle kubazali bekati abamatasa emsebenzini ngoba abakwazanga ukunakekela ikati labo elihle njengoba bekulindelekile. I-M-1 Cat Toilet yakhiwe ngezinto eziphephile nezingokwemvelo ezinomsebenzi wokuzenzakalela nomsebenzi wokuqeda amandla. Ngalesi sikhathi, kuzoba lula kakhulu ukuhlanza indle yekati.
Umsindo ophansi:Umklamo we-capsule wesikhala esihlakaniphile nesobuchwepheshe, amandla we-ultra-quiet nokusetshenziswa kwamandla okuphansi. Kukhuthazwe yi-capsule yesikhala, umsindo wokugijima omaphakathi uphansi kune-60dB, Vikela ukuzwa kwekati ngempumelelo enkulu, kungavumela ikati elinamahloni ukujwayela ngokushesha.
Ukuphepha kokusebenza:Uhlelo lokuvikela kathathu lwasemoyeni luhlose ukuvikela ukuphepha kwesilwane. Idizayini yokulwa nokugingqika ivimbela ngempumelelo izingozi ezinjengokugumbuqelwa nokudluliswa. Izomisa ukusebenza ngokushesha lapho izwa umzimba wangaphandle, ingakhomba ngokunembile izinsimbi zamakati ahlukene, ngeke igijime kuze kube yimizuzwana eyi-6 ngemuva kokuhamba kwekati, ukugwema ukwethusa ikati.
Kulula ukusebenza:Isikrini se-LCD sikhombisa idatha yokuvumelanisa nokhiye bokusebenza kusiza ukuqedela ukusebenza ngokushesha. Indawo ekhombisa ubuchwepheshe be-LCD ephezulu yenza ukusebenza kwezinkinobho zomsebenzi kube lula kakhulu, futhi idatha yesisindo sesilwane ikhonjiswa ngesikhathi sangempela.
Khulula izandla zakho:Idizayini enkulu yesikhala samakamelo, ingaqukatha isikhwama sonke sikadoti wekati ongu-6L, isudi yamakati amaningi ekamelweni elilodwa namakati amakhulu. Kulula ukuqaqa nokugeza, kunconywa ukuthi uhlanze ikamelo lokuzihlanza njalo ngenyanga ngokuhlanza nokusula.
Alikho iphunga:Umphumela wokususwa kwamapayipi amane ugcina amakati efisha nsuku zonke. Gcina isikhala esikahle sokususa uketshezi phansi, asikho isidingo sezinsiza ezithile zokukhipha iphunga, kungafakwa izikhwama ezijwayelekile zoqalo lwamalahle nezikhwama ze-aromatherapy.
Amasentimitha angu-25.6 x 24.8 x 26
Amandla kadoti Bin
Eceleni 1W, Running 6W
Kulinganiswe ngo Voltage
• Ukulawulwa kwekhwalithi okuqinile ukuqinisekisa ukuthi isilinganiso esifanelekayo semikhiqizo yezilwane silingana no-100%
• Ifektri intengo yokuthengisa eqondile, inikezela ngentengo yokuncintisana ethe xaxa kubathengisi
• Kutholakala edolobheni elibekezelela ngokweqile izilwane ezifuywayo, futhi iningi leqembu le-R & D belilokhu lixhumana nezilwane ezifuywayo kusukela ebuntwaneni, okusho ukuthi singakhetha kangcono futhi sithuthukise imikhiqizo yezilwane
• Nikeza ukunikezwa kwezilwane ezisezingeni eliphakeme nokwengezwe ngenani eliphakeme, inzuzo engcono yokuncintisana
Sebenzisana nendawo yokugcina impahla yaphesheya kwezilwandle e-United States, Canada, Germany naseNetherlands, engaqinisekisa ukulethwa okusheshayo kwesampula noma iqoqo elincane
• Isevisi yobungcweti emva kokudayiswa, enikezela ngosizo lobuchwepheshe oluku-inthanethi kanye nensizakalo yokubuyisa ehlelekile
Langaphambilini Okuphakelayo okuzenzakalelayo kwe-E Okuzenzakalelayo Kwekati Nenja
Olandelayo: Ibhokisi le-M-2 Automatic Cat Litter
Bhala umyalezo wakho lapha bese uwuthumela kithi
Isitayela sepotimende lekati yangasese
Ibhokisi le-M-2 Automatic Cat Litter
Ikheli: 1388 Tianfu Avenue, Chengdu, Sichuan, China